UPDATE: Jubbaland oo ku hanjabtay in DF Somaliya ay qaadi doonto wixii ka dhasha xariga wasiir Janan! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Jubbaland oo ku hanjabtay in DF Somaliya ay qaadi doonto wixii...
UPDATE: Jubbaland oo ku hanjabtay in DF Somaliya ay qaadi doonto wixii ka dhasha xariga wasiir Janan!
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynaha maamulka Jubbaland, mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa Khamiistii maanta shir guddoomiyay kulanka Golaha Wasiirada Jubbaland.
Wuxuuna ugu horayn golahu uu tageeray dadaalka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee ay xalka kaga gaartay tabashooyinkii ka dhashay Doorashooyinkii Madaxweynaha iyo Baarlamaanka ee dhawaan dhacay iyagoo soo dhaweeyay in wax walba oo tabashooyinka ah lagu xaliyo Sharciga iyo Hay’adaha Dowliga ah dhexdooda.
Dhinaca kale, waxaa golahu uu cambaareeyay xariga Sharci darada ah ee Dowladda Federaalka ah ay kula kacday Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, iyadoo bilo ka hor ay Maxkamadda Gobolka Banaadir ay sheegtay in la laalay dacwadii ka taalay.
Golaha wasiirrada ee maamulka Jubbaland, ayaa sheegay in cawaaqibka ka dhasha falkaas sharciga ka fog ay masuuliyadiisa qaadayso Dowladda Federaalka ah.
Si kastaba, golaha wasiirrada ee Jubbaland, ayaa sidoo kale ka hadlay Xayiraada dhinaca duulimaadyada shacabka ah ee Dowlada Federaalku kusoo rogtay dadka reer Jubbaland, waxaana howshaas iyo xariga wasiirka Amniga loo xil saaray gudi ka kooban toddobo Wasaaradood iyadoo gudigan la faray in ay xal rasmi ah ay yimaadaan oo culayska lagaga qaadayo dadka shacabka ah.
golaha wasiirada jubbaland
u hanjabtay dowladda Soomaaliya
wixii ka dhashay
xariga wasiir Janan